DAAWO Khudbadda xidhitaanka wajiga 1aad ee Barnaamijka shaqo Qaran ee Agaasimaha Shaqo Qaran |
DAAWO Khudbadda xidhitaanka wajiga 1aad ee Barnaamijka shaqo Qaran ee Agaasimaha Shaqo Qaran
Mudane Madaxweyne; Gudoomiyaha Golaha Wakiilada; Gudoomiyaha Xisbiga UCID, Gudoomiyaha KMG ee Xisbiga WADANI; Madaxweyne-kuXigeenadii Somaliland; Wasiirada; Xildhibaanada Golayaasha; Madaxda Hay’adaha Dawladda, Gudoomiyayaasha Jaamacadaha Dawliga ah; Taliyayaasha Guud ee Ciidamada qalabka sida; Abaanduulayaasha ciidanka, saraakiisha, saraakiil xigeenka ciidamada qaranka, Gudoomiyaha Gobolka M/Jeex; Duqa Caasimada; dhalinyarada shaqo qaran, Marti-sharafta kale ; Saxaafadda; Mudanayaal & Marwooyin
Asalamu calaykum waraxmatulahi wa barakaatu,
Ilaahay baa mahad leh mar kale inagu simay inaynu isugu nimaadno madashan qiimaha badan ee aynu ku soo gunaanadayno wajigii koowaad ee barnaamijka shaqo qaran. Marka labaad waxaan u mahadnaqayna Madaxweynaha Qaranka ee wakhtigiisa qaaliga inoo soo huray si uu inoogu xidho tababarka, sidoo kale, waxaan uga mahadnaqayaa xaqal-ciidkii aad ugu deeqday dhalinyarada shaqo qaran iyo macalimiinta gacanta ku haysay, waxaan leenahay Alle hakaa abaaliyo tacabka aad dhalinyarada galinayso.
waxaan jecelahay in aan si kooban uga waramo waayihii na soo maray mudadii wajigii koobaad iyo qorshaha wajiga labaad ee shaqo Qaran.
Saddex bilood ka hor maalintii aad daahfurtay barnaamijkan guud ahaan bulshada Somaliland si luxdan ayay u soo dhaweeysay, dhinaca kale wuxuu dareen ishuwan ku abuuray mandaqada aynu ku noolahahay oo ka dareen-celiyay markii barnaamijka la daahfuray. Dadka wax sii dhugta qaarkood waxay xilligaa ka dardaarwarinayeen suurtagalnimada in xukuumaddu kafaala-qaadi karto culayska dhaqaale iyo farsamo ee barnaamijkani la imanayo. Si kastoo ay ahayd, Mudane Madaxweyne, waxaad go’aankaaga geesinimo ku suurtagalisay xaajo ugub ah oo suurtagalnimadeeda warwar badani ka taagnaa.
waxa si kalsooni ku jirto halkan uga sheegayaa in mudadii tababarkan shaqo qaran socday si mug leh loo taabey (gaadhey) himilooyinkii la higsanayay oo ay ugu mudnaayeen:
Waxa xoogaystay is-dhexgalka (integration), isu kal-samaanta (solidarity) iyo is-weheshiga (cohesion) dhalinyarada somaliland.
Waxa bislaaday ilaa heer wacyiga iyo aqoonta dhalinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed, dhaqameed, dhaqaale-bulsheed iyo juquraafiga dalka Somaliland,
Waxa abuurmay dareenkii wadaniyeed & sharci ee dhalinyarada. Taas darted, waxay maanta u diyaar yihiin u hagar-bixidda gudashada waajibaadyada & masuuliyadaha muwaadinimo iyadoo aan cidina ku khasbayn;
Waxa dhismay garaadkii iyo caafimaadkii jidh ahaaneed ee dhalinyarada,
Waxa horumaray fahamka dhaqanka mutadawacnimada iyo is-kafaala-qaadka bulsheed (social welfare),
Waxa si waaqici ah dhalinyaradu u taabteen wanaaga ay leeahay cadaalada iyo sinaanta bulshadda oo ah ta ay halkan ku yimaadeen.
Daryeelka & caafimaadka
Waxa aad loogu dedaalay intii awoodu saamaxday in la daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee dhalinyarada dhinaca internetka, korontada, cuntada iyo biyaha. Tusaale ahaan waxa todobaadkiiba waxa loo qali jiray 74 neef oo adhi ah oo kharash badan ku fadhiyay.
dhalinyarada xanuunsata waxa lagu daawayn jiray bukaan-socotada (clinic) kuliyadda ku yaala, kii u baahda baadhis iyo daawayn dheerad ah waxa la gayn jiray isbitaalka guud ee Hargeysa oo aanu heshiis kula jirno. Mudadaas waxa isbitaalka Hargeysa lagu daaweeyay …… oo dhalinyarada ka mid ah oo 2 ka mid ah qaliin culus loogu sameeyay, taana ay haatan ka soo kabteen. Alle ayaan ku mahadinaynaa in aanay jirin mudadaas cid wad ama wadeeco nagaga baxday. Dhamaantoodna iyagoo fayow tababarkoodii u dhamaaday.
Dhinaca nabadgelyada waxa si mudakarnimo ah isaga xilsaaray ilaahayna la qabtay ciidanka qaranka JSL oo heegan u ahaa habeen iyo dharaar. Wax nabadgelyo dari ahina ma dhicin mudadaas.
Waxbarashada madaniga ah iyo ciyaaraha
Dhalinyaradu waxay bishii u dambaysay qaadanayeen duruus la xidhiidha cilmiga bulshada iyo anshaxa (civic & ethical education) oo ay bixinayeen macalimiin xeeldheerayal ah oo aanu ka soo amaahanay Jaamacadda Camuud. Sidoo kale, waxay qaateen barashada Dastuurka oo ay siiyeen aqoonyahano ka tirsan Wasaaradda Xidhiidhka Golayaasha iyo Dastuurka. Waxana dhamaantood loo qaybiyay nuqulo Dastuurka qaranka ah.
Waxa la abuuray toban kooxood oo kubada cagta ah kuwaas oo mid kastaa hurin metalayso, waxa kooxahaas loo qabtay tartan muddo socday oo ay gabagabadii isugu soo baxeen kooxaha hurimaha 1aad & 5aad waxana koobkii ku guulaystay hurinta 5aad. Dhinaca kale, waxa la qabtay tartanka ciyaaraha fudud gaar ahaan orodada kala duwan oo 5000 mitir ka mid yahay.
Waxa la diiwaangeliyay macluumaad shakhsiga (personal information) ee dhalinyarada (magaca, sawirka, cinwaanka, takhasuska tacliimeed, iwm) waxana abuuray kayd-xog (data base) oo lagu hayo xogtaas.
Sida aan hore u sheegay waxa dhalinyarada ku duugan hal-abuur (talents) badan. Inkastoo wakhtiga firaaqadu ku yaraa haddana waxa ka soo dhex baxay dhalinyarado hal-abuur u ehel ah: tusaale ahaan, wax aka mid ah suugaanyahano tiro badan, sawir-qaadayaal, dhakhtaro, orodyahano, qoraayo, farshaxan, injineero iwm
Anshaxa & loox-tuurka
Waa shay dabiici ah in anshax-darro iyo loox-tuur (drop out) jiri karo meel ay ku kulmeen bulsho intaa tiro le’eg. Waxanu ku dedaalnay in tirada aadka u yar ee ku kacda anshax darro aanu qaadno talaabooyin aan ku toosinayno sida waano, ganaax, xadhig iyo mararka qaarkood caydhin. Guud ahaan, aad bay u yarayd falalka anshax darada ee dhacay mudadaas, waanay diiwaangashan yihiin.
Intii ka dambaysay daahfurkii barnaamijka haba yaraatee ma jirin cid loox tuurtay, taa bedelkeeda waxay soo jiidatay dhalinyaro tiro badan oo su’aasha ay ku waydiinayaan tahay goorta la qorayo dufcadda 2aad.
Halkan kuma wada koobi karo hawlihii tirada badnaa
Wajiga labaad ee barnaaamijka
maanta wixii ka dambeeya waxaynu gudagalaynaa wejigii labaad ee barnaamijka shaqo qaran. Kaas oo ka kooban carbis-shaqo (internship) iyo adeeg bulsho (social service) oo is barkan.
Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee wajigan 2aad laga leeyahay waxa ka mid ah:
In mudadaas ardaygu helo fursad carbis-shaqo (internship) uu ku tababarto.
Inuu kasbado waayaaragnimo xirfadeed & shaqo-wadaag (team work)
In ardayga lagu barbaariyo curfiga u adeegga mutadawacnimo ee bulshada oo ka qayb ka ah waajibaadka muwaadinka (citizenship obligations).
In la kobciyo tayada macalimiinta dugsiyadda dawliga ah oo tababar aqooneed la siinayo, ayadoo laga faa’iidaysanayo sanad-dugsiyeedka ay kaalintoodii daboolayaan dhalinyarada shaqo qaran.
iyadoo maanka lagu hayo haabashada ujeedooyinka aan soo sheegnay, lana tixgelinayo takhasusyada xirfadeed iyo baahidda adeeg-bulsho ee ugu muddan ayaa la qorsheeyay:
in wajiga 2aad ee shaqo qaran mudadiisu fidsan tahay 9-10 bilood ay dhalinyaradan (wiilal & gabdhoba) ka hawlgalaan goboladii ay ka kala yimaadeen.
in mudadaas adeega iyo carbiska shaqo ee dhalinyarada loo qoondeeyay in la siiyo qadar lacageed oo ku salaysan 75% mushaharka aasaasiga ah ee darajada “A” oo ah tan shaqaalaha heerka jaamcadeed ah.
Iyadoo laga qiyaas qaadanayo xogta ka soo baxday diiwaangelinta macluumaadka dhalinyarada shaqo qaran (Database) laguna xisaabtamayo awooda dhaqaale iyo xamilka hay’adaha dawladda ee gobolada, baahidda adeegyada bulshada, iwm; waxa dhalinyarada adeega shaqo qaran mudadaas lagu meeleeyay wasaaradahan:
Wasaaradda Xoolaha & Kaluumaysiga
Wasaaradda A/Gudaha (D/Hoose ee Gobolada)
Dhinaca kale, waxaanu dhalinyarada shaqo qaran dooransiinay si xor ah inay u kala doortaan ka ay doorbidayaan inay ka mid noqdaan shaqaalaha madaniga ah (civil service) ee dawladda iyo inay ku biiraan ciidamada qalabka sida ee qaranka. Halkaas waxa ka soo baxday in dhalinyaro tiradoodu dhan tahay 120 (103 wiil & 17 gabdhood) ay codsadeen inay ku biiraan ciidamada qalabka sida.
Waxa xusid mudan in dhalinyarada soo codsaday ku biirista ciidamada laga cafiyo mudada adeegga iyo carbiska shaqo marka ay ka gudbaan shuurudaha ku biirista ciidamada u yaala sida caafimaadka. Hawshaasna waxanu ku wareejinaynaa taliyayaasha guud ee ciidamada qalabka sida.
Waxaan ka marag kacayaa dedaalka dheeraadka ah ee aad hadh iyo habeen ugu jirto horumarinta dhalinyarada iyo la dagaalanka camal la’aanta, waxa aan caqliga fayoobi marnaba dafiri Karin yididiilada uu dhalinyarada u abuuray barnaamijka shaqo qaran oo hubaal soo nooleeyay rajadoodii.
Taas ka sokow, waxa farxad u ah qaranka iyo dhalinyaradaba inaan halkan idiinku bushaareeyo inuu midhodhalay mid ka mid ah dedaalkii Madaxweynaha iyo xukuumadiisu ka galeen shaqo-abuurka. Kaas oo ah dhalinyaradii ay qaadanaysay shirkada saliid-sifaynta ee Berbera. Waxaan idinla wadaagayaa in shirkadaasi haatan u soo diyaargarawday qaadashada dhalinyarada shaqo qaran ee madaxweynuhu ka codsaday. Waxa dhalinyaradaas lagu qaadanayaa tartan imtixaan oo furan oo shirkadu si cadaalada ah u qaadayso bilaha August & September ee sanadkan. Dhalinta ku guulaysata oo 30% haween yihiin, 70% wiilal yihiin waxa muddo 2 sanno ah shirkadu ku soo tababari doontaa petroleum engineering dalweynaha Shiinaha. Waa guul u soo hoyatay qaranka Somaliland, waa guul u soo hoyatay dhalinyarada. Alle haynugu simo nimcada.
Waalidku sidiisaba kama daalo waano iyo wax-sheeg. Anigoo waalid u ah dhamaan dhalinyarada shaqo qaran, kuna kalsoon inay mudakarnimo gaadheen, hadana waxaan u guntayaa dardaarkan:
Waxaa mudadaa wajiga labaad ee shaqo qaran hay’ado dawladeed oo ay sii joogaan masuuliin iyo shaqaale idiinka sii horeeyay, waxa laydinka rabaa in aad goobta shaqada ku joogtaan anshax-wanaag, dhego-nugayl iyo inaad wax ka barataan.
Waxa u adeegi doontaan umadiina waxa waajib idinku ah inaad si tudhaale iyo lexjeclo ku jirto ugu hagar baxdaan adeega aad umadda u qabanaysaa oo laydin mahadiyo.
Waxa tihiin dufcaddii 1aad ee shaqo qaran, waxa laydinka rabaa inaad tusaale wanaagsan oo lagu soo hirto/ la majeerto u noqotaan bulshada.
Mudada aad wajiga 2aad ku jirtaan meel kasta oo aad ka hawlgashaan xafiis ahaan ishaanu idinku haynaynaa, idin kormeeraynaa, warbixintiina helaynaa. Taas darted, xilgudashadiina iyo anshaxiina mudadaas ayaa qiimayntiina dambe saamayn ku yeelan doonta.
Waxan ku soo koobayaa Balanteenu waa shaqo iyo sharaf.
Gebagebadii, waxaan mahadnaq u jeedinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay hirgalinta tababarkan, oo ugu mudan yihiin:
Wasiirka wasaaradda Gaashaandhiga iyo Taliyaha Guud ee ciidanka qaranka, abaaduulaha 1aad. janaraalada, taliska kuliyada saraakiisha & dugsiyada. Saraakiisha iyo saraakiil xigeenada macalimiinta ah, ciidanka amniga.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Gudoomiyayaasha lixda gobol doorasho oo si hagar la’aan ah noola shaqeeyay.
Wasiirka, Agaasimaha Guud, isuduwayaasha gobolada ee Wasaaradda Waxbarshada iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka oo hawlo badan nala qabtay.
Wasiirka, Agaasimaha Guud iyo isuduwayaasha gobolada ee Wasaaradda Shaqo galinta oo wax badan Iyana nala qabtay.
Gudoomiyayaasha, maamulka iyo macalimiinta Jaamacadaha Camuud, Hargeysa, Berbera, Burco, Nugaal iyo Sanaag oo gacanta ku haya tababarka 500 hablood oo shaqo qaran ah.
Wasiirka, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xidhiidhka Golayaasha oo qayb laxaad leh ka qaatay barista Dastuurka ah ee dhalinyarada,
Wasaaradda Caafimaadka oo naga taakulaysay daawada iyo maro kaceecooyinka iyo fayo-dhawrka
Hawlwadeenda xafiiska Shaqo Qaran, Agaasimaha Guud iyo shaqaalaha Madaxtooyada oo la’aantood aanay hawshani suurtagashen.
Inta tirada badan ee aanan halkan ka wada xusin ee dhiirigalinta iyo taageerada nala barbar taagnaa mudadii aanu hawshan soo wadnay.